प्रधानमन्त्री ओलीलाई गंगामायाको प्रश्न, 'प्रचण्डलाई हत्कडी लगाउन सक्छौ ?'| Gandaki Voice
प्रधानमन्त्री ओलीलाई गंगामायाको प्रश्न, 'प्रचण्डलाई हत्कडी लगाउन सक्छौ ?'
काठमाडौं, १६ पुस।
अपराधी छुटाउने प्रचण्डलाई कारबाही, श्रीमान् मार्नेलाई कारबाही, छोरा जेल हाल्नेलाई कारबाही, न्याय मार्नेलाई कारबाही प्रचण्ड बाबुरामलाई हत्कडी । यी हुन्, न्यायका लागि वर्षौदेखि संघर्षरत गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीको १२औँ अनसनका माग । उनले १२औँ पल्ट अनसन थालेको १० दिन भयो । नौ वर्षदेखि अन्न छोडेकी गंगामायाले अहिले पानी र औषधि खान छोडेकी छन् । वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न थालिएपछि घरि यता घरि उता सारिए पनि अहिले नजिकैको ट्रमा सेन्टरको ७औँ तलामा गंगामाया अनसनरत छिन् ।
२०६९ साल माघ २२ मा पहिलोपल्ट गंगामाया आफ्ना पति नन्दप्रसाद अधिकारीसँग अनशन बसेकी थिइन । १२औँ पल्ट अनसन बस्दासम्म पनि उनले न न्याय पाएकी छिन् बरु सात वर्षअघि निधन भएका श्रीमानको दाहसंस्कार समेत गर्न पाएकी छैनन् । श्रीमानको शव अहिले पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शवघरको वाकसमा छ । कान्छा छोरा कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै न्यायको लडाईं लडेको वर्षौं बित्यो । तर, हत्या आरोपीलाई राज्यपक्षबाट सजाय भएन । किटानी दिएका १३ जनामध्ये १२ जनालाई चितवन जिल्ला अदालतले सफाई दिइसकेको छ ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अनसन बसेको स्मरण गर्दै गंगामायाले भनिन्, 'अहिले प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले दुई पल्ट सरकार चलाए । तर, उनले केही गर्न सकेनन् । ओलीलाई आफुले प्रचण्डलाई हत्कडी लगाउन सक्छौ कि सक्दैनौँ ? भनेर सोधेको प्रश्न पनि कसैले बालुवाटार नपुर्याइदिएको गुनासो उनले गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘म केपी ओलीलाई सोध्छुँ, प्रचण्डलाई हत्कडी लगाउन सक्नु हुन्छ कि हुन्न ओलीज्यू ?’
न्याय पर्खिरहेकी उनलाई साथ दिनेहरु घट्दै गएका छन् । सत्तामा बस्नेहरु आफ्नो टाउकोमा गाल नपरोस् भनेर ज्यान बचाइदिने उपाय मात्रै गरिरहेका छन् । गंगामाया भन्छिन्, 'अस्पतालमा राखेका छन् । औषधि दिएका छन् । गाल बचाउन मलाई यहाँ राखेका छन् । न्याय कसले दिलाउने खोई ? अहिले मानव अधिकारकर्मीहरुले पनि बेवास्ता गर्न थालेका छन् । पहिले बोकेर हिँड्ने मानव अधिकारकर्मीहरुले त फर्केर समेत आएका छैनन् ।'
डाक्टरले औषधि खान भनेका छन् । तर, उनले औषधि लिन मानेकी छैनन् । राज्यले दिने औषधि समेत उनले सहज रुपमा पाउँदिनन् । आँखामा राख्ने एउटा ड्रप लिन वीर अस्पतालका निर्देशकको तोक चाहिन्छ । वीरका निर्देशक डा. केदार प्रसाद सेन्चुरी साह्रै अफ्ठ्यारा । उनले औषधि दिनुपरे मुटु झिकेरै दिनुपरे जस्तो गर्छन् । गंगामायालाई सजिलै औषधि दिँदैनन्, उनी । यो कुरा गंगामायालाई औषधि दिने स्वास्थ्यकर्मीले समेत स्वीकारिन् ।
ती स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार डा। सेन्चुरीले हत्तपत्त तोक लगाइदिँदैनन् । कहिले त घण्टौँ कुराउँछन्, अनि रित्तो हात फर्काउँछन् । धन्न वीर अस्पतालभित्र स्वयंसेवी संस्था संजीवनी सेवा संघ भएर गंगामायाले जसोतसो औषधि पाउँछिन् । विगत चार पाँच वर्षदेखि संजीवनीले गंगामायालाई आवश्यक औषधि र खानेकुरा दिइरहेको छ भने कहिले कहाँ त गंगामायालाई कुर्न पठाएका महिला प्रहरीले किनेर ल्याउँछन् ।
अस्पतालको फार्मेसीबाट दिइनु पर्ने औषधि संजीवनीले दिनुपरेपछि के गति होला रु र, गंगामायालाई गरेको व्यवहारबारे डाक्टर सेन्चुरीलाई सोध्दा झर्किन्छन् । उनी अरुको कुरा सुन्नै चाहँदैनन् । यस्तो व्यवहारले थकित गंगामायाले अब मर्नु परोस्, तर औषधि माग्दिन भनेकी छन् । उनी भन्छिन्, “घाँडो भएर किन बस्नु ?”
नौ वर्षदेखि अन्न चिन्न छोडेको शरीर कस्तो होला रु सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैमाथि गंगामायाले नौ, दश थरी औषधि लिइरहनु परेको छ । अनसन बसेको दिनदेखि औषधि छुटेपछि हात मुठ्ठी पार्न मिलिरहेको छैन भने खुट्टा सुन्निएर दायाँ बाँया सार्न सकिन्न । पहिले पहिले जाडोमा दिउँसो घाम ताप्ने गरेकोमा अहिले गंगामाया भित्रै थन्किएकी छन् । उनलाई राखिएको कोठाको सिलिङमा एसी जोडिएको छ तर, चल्दैन ।
पुरानै हिटरले एकछिन् न्यानो पार्छिन्, उनी । भेट्ने मान्छे आउँदा ३० मिनेट जति पनि उनी अढेस लगाएर बस्न सक्दिनन् । उनी नसाको मात्रै दुई थरी औषधि खान्छिन् । क्याल्सियम, मुटुको रगत पातलो पार्ने औषधि, ग्याष्ट्रिक, पिसाबको, वाथको र मुखमा घाउ आउँदा खाने औषधिले उनलाई छोडेका छैनन् । आँखाको समेत दुई थरी औषधि उनलाई चाहिन्छ ।
जेठो छोराको चिन्ता
जेठो छोरा नुरप्रसाद अधिकारी २६ महिना १६ दिन जेल परेर निस्किएको खबर मात्रै पाएकी छन्, उनले । भेट्न पाएकी छैनन् । उनलाई चिन्ता छ, छोरालाई जेलबाट निकालेर सडकमा छोडिदिए भनेर । नुरप्रसाद पाँच पल्टसम्म जेल परिसके । पछिल्लो समय उनलाई अदालतको अवहेलना र ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो । आफ्नो छोरालाई झुठा मुद्दा लगाएको भन्दै गंगामाया निकै दुःखी छिन् ।
कोरोना महामारीका बेला भेटघाट गर्न मिलेन । तर, गंगामायालाई अस्पतालका केही कर्मचारी र कुरुवा बाहेक कसैले सोधेनन् । सरकारमा बस्नेले त झन् स्वरै निकालेनन् भने मानव अधिकारकर्मीले पनि कोरोना महामारीमा के भयो ? कसो भयो भनी सोधेनन् । वीर अस्पताल कोरोनाका विरामीले भरिँदा गंगामायालाई मेडिकल वार्डतिर सारियो । जोखिमकैबीच फेरि ट्रमा सेन्टर सारियो । अब फेरि गाह्रो हुँदा आइसीयुका लागि वीरमै लैजानु पर्छ । गंगामायालाई ट्रमामा राखिए पनि ट्रमाले कुनै पनि सुविधा दिन मानेन । खाली क्याविन मात्रै दिएको छ, सबै थोक वीरबाटै लैजानुपर्छ ।
न्यायको आशा मर्दै
यसअघि राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालय पुगेपछि नेपालका न्यायालयले आफ्नो पीडा नसुने पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले न्यायका लागि पहल गरिदेला भन्ने आश जागेको थियो, गंगामायालाई । अहिले त्यो झिनो आशा पनि मर्दै गएको देखिन्छ । उनी राष्ट्रसंघले केही गर्ला कि भनेको त्यतिबेला लिएको फाइलको कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले झिनो आश मात्रै बाँकी रहेको बताउँछिन् ।
विकास बस्नेतले लिएको फाइलबारे कुनै जानकारी नआएको उनले बताइन् । जिल्ला अदालत चितवनले गरेको सफाइको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन हाल्नु पर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको गंगामायाले जानकारी दिइन् । किटानी जाहेरी परेका मध्ये १२ जनाले सफाई पाउँदा युरोपमा लुकेर बसेका रुद्र आचार्यको मुद्दा मुल्तवीमा छ ।
२०६१ साल जेठ २४ गते चितवन मामाघर गएका बेला गंगामायाका कान्छा छोरा कृष्णप्रसादको तत्कालीन विद्रोही माओवादीका कार्यकर्ताले हत्या गरेका थिए । हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनसन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको २०७१ असोजमा निधन भएको थियो भने गंगामाया अहिले पनि न्यायका लागि संघर्षरत छिन् ।
काठमाडौं-पोखरा-बाग्लुङको गाडी भाडा चार हजार !, काउन्टरका कर्मचारी पक्राउ
लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलद्धारा राजीनामा
धौलागिरी हिमालमा हेलिकोप्टर र दुई शव भेटियो
नेपालमा फेरि लकडाउन हुने सम्भावना कति ?
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ संकटमा, सरकार ढल्ने निश्चित